बलात्कारीको पौरख देखाउने अंग छेदन गर्नुपर्छ( भिडियो सहित) - TV Annapurna
August 11, 2018 September 19, 2018 Annapurna TV
महिलामाथि हुने शारीरिक शोषण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढीरहेका छन् । कार्यक्षेत्र,समाजमात्रै होईन परिवारभित्रबाट समेत महिला असुरक्षित छन भने पछिल्ला केही घटनाले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध न्युनिकरणका लागी राज्यले निक्कै पहल गरेको भनेपनि दैनिकजसो यस्ता घटना कुनै कुनै रुपबाट प्रस्तुत हुने गरेका छन । यहि सन्द्र्धभमा महिला हिंसा त्यसमा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण, यसको न्युनिकरण, राज्यको दायित्वका के हो ? यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित ७५ बढि महिलाको पीडामा मल्हम लगाउन व्यस्त रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापासँग तुल्सी अर्यालले गरेको कुराकानी
१यस सस्था खोलिएको पनि १५ वर्ष भयो अहिलेसम्म महिलाहरु माथि हुने हिंसाजन्य गतिविधिपछि पीडकलाई कारवाही गराउँन, पीडितलाई न्याय दिलाउँन कति काम गर्न सकियो जस्तो लाग्छ ?
नेपाल सरकारले चेलीबेटी बेचबिखन शुुन्यमा पुर्याउछु भनेको छ ।महिला हिंसा बलात्कारका घटना शुन्यमा पु¥याउछु भनेर सरकारले भनेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न एउटा सामान्य स्वयमसेवीकाको रुपमा अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु । हामी सरकारलाई सहयोग गर्न बसेको किनभनेम पनि यो देशकोनागरिक हुँ । नागरिक भएकोनाताले यो मेरो कर्तव्य हो । जसरी नेपाल सरकारले संविधानमाभन्यो ः सबै महिलालाई सम्मान व्यवहार गरिने छ । तर, संविधानमा महिलाको विषयमा यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर लेखिए पनि प्रभावकारी रुपमा महिलाको विषयमा काम गर्न सकिरहेको छैन । हामी त दुःखपाएका महिलाहरुलाई थोरै भएपनि सहयोग होस् भनेर स्वयंसेवी भएर संस्थागत भएका हौं ।
२.महिलाहरु माथि यति धेरै हिंसा बढिरहेको किन होला?
बलात्कार भनेको एउटा जघन्य अपराध हो । हाम्रो बुझाइमा जघन्य आपराध भैकन पनि यो अपराध गर्नेले चाही सामान्य भन्दा सामान्य कानुनी सजाय पनि पाएका छैनन । जब जघन्य आपराध हुँदा पनि सामान्य कारवाही पनि हुदैन भनेपिछ यस्ता गलत काम गर्नेको मात्र होइन अरुको पनि मनोबल पनि बढ्छ ।महिला हिंसा बढ्नुमा सबैभन्दा दोषी हाम्रो समाज पनि छ । किन की कानुन यही समाजले बनाउँने हो । कानुननै दोषी छ र हाम्रो छनौट नै दोषी छ ।बलात्कारको धटना बढ्नुमाहामी नै दोषी छौं । बलात्कार हँुदा हामी चुप लागेर बस्छौं तर, यसरी बस्नु हुन्न । बलात्कार बढ्नुमा ३ करोड नेपाली नै दोषी हुन् । हामीले बलात्कार भयो रे भन्दै बढी प्रचार चाही गर्यौ । तर यसपछि चाही गरिने के हो त त्यसबारे न सरकारले सोच्यो न तपाई हामीले ।बलात्कारीलाई हुनु पर्ने सजायँ नभए पछि चाँही छोरीहरुको अबस्था झन् झन् दयनीय हुदै आएको छ । दोषी हामी सबै छौ यसको न्यूनीकरणको लागि हामी सबै एक जुट हुन जरुरी छ ।
३ तपाइको सस्थामा बलात्कृत भएर आएका छोरी चेलीको पारिवारिक अवस्था के कस्तो थियो ?
धेरै जसो सबै हाम्रो समाजमा गरिब जनजाति भनेर चिनिने छोरीहरु नै हुनुहुन्छ । हाम्रो सस्थामा७० जनामा ३५ जनादलित र अशिक्षित परिवारबाट आएको हुनुहुन्छ । दलितको लागि आन्दोलबन गर्ने नेताहरु खै कहाँ हुनुहुन्छ ?छोरी चेलीहरु बलात्कृत हुँदा के हेरेर बस्नु भएको छ ?जनजातिहरु पनि अधिकार आन्दोलनका कुरा गर्नुहुन्छ । तर, यसरी छोरी चेलीहरुमाथि हिंसा, विभेद र अन्याय हुँदा के हेरेर बस्नुभएको छ ?
४ कतिपय घटनाहरु बाहिर नै आउदैनन र आएका केही घटनाहरु पनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर मिलापत्र गरिन्छ यस बारे के भन्न चाहनु हुन्छ तपाई ?
मिलापत्र गर्ने मान्छेहरुलाई नै कानुनी काठघरमा लानुपर्छ । बलात्कार भनेको सामान्यचोरी होइन, अर्काको जीवन नै तहसनहस पार्ने हिंसा हो । अर्काको अस्मिता लुट्ने अनि हत्या भइरहेको छ । मान्छे एकचोटी मर्छ सकिन्छ । तर, तर हाम्रो समाजमा बलात्कृत छोरीहरुलाई यसरी हेरिन्छ की अब हो खतमभयो । सबै बर्बाद भयो । तर बलात्कार हुदैमा कोही बर्बाद हुदैन । बलात्कार भनेको के भाको होर ? सामान्य सेक्स भएको हो , भोलिपर्सि बिहे भएपछि सेक्स नै त हुने हो भन्ने पनि छ । तर, बलात्कार भनेको जबजस्ती,इच्छा विपरीत हुनु हो । सेक्स हुनु ठुलो कुरा होइन तर जबर्जस्ती भाको हो, यसलाई कारवाही गर्छौ भनेर खै उसको परिवार त्यहाँ उभिएको ?खोइ राज्य उभिएको ?हामी ब्याख्या नै त्यसरी गर्छौ की बलात्कार भएप्छि अब छोरी सक्किइ, गई भनेर भनिंदा उसलाई मेरै गल्ति हो कि जस्तो ‘फिल’ हुन्छ । तसर्थ बलात्कारीले गाउँ छोड्ने हो, मुन्टो लुकाउने हो, तर, बलात्कृत छोरीले छाती फुलाएर बाँच्न पाउनु पर्छ भनेर खोइ परिवारले सहयोग गरेको ? खै समाजले सहयोग गरेको ?
५.नेपालमा महिलाकर्मीहरु, महिलाहरुका विषयमा काम गर्ने एनजिओ आइउनजिओ धेरैनै छन् तर महिला हिंसा किन घट्न साकिरहेको छैन के यिनीहरु प्रभावकारी नभएकै हुन् त ?
जजसले काम गर्नुपर्ने हो आफ्नो ठाउबाट सबैले काम गर्नु भएको छ ?हुनु पर्ने के हो भने, हामीले पनि बोलेका छौ, मिडियाकर्मीहरुले पनि बोल्नु भएको छ ।सबैले बोल्या छन् । बलात्कारीलाई यो हुन पर्छ त्यो हुनु पर्छ भन्छौं तर, गर्ने चाँही कसले हो त नि?तपाई हामी संग न रिसोर्स छ न त कानुनले नै शक्तिदिएको छ । जसको कलम चल्छ उसको बोली बिक्छ उसले बलात्कारको विरुद्ध एक शब्द चुसुक्क बोल्दैन भनेसी कसरी चाँही परिवर्तन हुन्छ ?तपाई हामी बोल्छौ, हामी त गल्लिका कुकुर जस्तै हामीले बोलेको केही न केही। जसले आफ्नो बहिनी,भतिजी, छोरी चिन्दैन त्यो मानब होइन दानब हो ।जुनदिन मृत्युदण्डको सजाय बनाएर २र४ जनालाई जब झुन्ड्यान्छ अनि बल्ल महिला माथि हुने यस्ता हिंसाका घटना कम हुन्छन् ।यदि बलात्कारीलाई तत्काल मृत्युदण्डको सजायँ असम्भव भए बलात्कारीले आफ्नो जुन अंगले आफ्नो पौरख देखाएको हो त्यो अंगनै छेद गर्नुपर्छ । आफ्नो छोरीचेलीको अस्मिताको पहरेधार आफै बनौ र बलात्कारीलाई फाँसी चाहिन्छ भनौ ।
६. कानुनी प्रक्रिया कस्तो भयो भने चाँही यस्ता घटनाहरु निर्मुल गर्न सकिएला?
हाम्रो देशको कानुनी प्रक्रिया अहिलेसम्मको झन्झटिलो छ । एक त न्याय नपाउने र न्याय पाए पनि ढिला पाउने जस्ता कानुनी प्रक्रिया नै फितलो छ ।गहकिलो कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर सोचेकै छैनन् सबैलाई आफ्नो कुर्सि प्यारो छ ।अपराधीहरु भाइभतिज केही हुदैनन् उनीहरु राक्षस नै हुन् भनेर व्यवहार गर्नु पर्छ । छिटो छरितो प्रक्रियाबाट न्याय दिनुपर्छ ।बलात्कारको केस मान्याय सम्पादन गर्न पनि ५ वर्ष, १० वर्ष लगाउने होर ?बलात्कारीले एक चोटी बलात्कार गर्छ तर हाम्रो संरचनाले पलपल बलात्कार गर्छ । यस्ता अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
७. मेडिकल रिपोर्टबाट लिने प्रमाणलाई कसरि लिनुहुन्छ तपाई ?
अहिले यही मेडिकल रिपोर्टबाट लिने प्रमाणलाई ठूलो प्रमाणको रुपम ालिईन्छ । तर यहा धेरै मेडिकलका रिपोर्टहरु भन्दा हाम्रो आँखा अगाडी बलात्कार भएको कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ । तर कोही कोही डाक्टरले अपराधीले धम्काएको भरमा,फकाएको भरमा,लोभ्याएको भरमा डाक्टरले त्यहाँ लेख्दा हुन्छ नो रेप रेस्पोन्स । उसले त्यति सानो कलमले लेख्दिा खेरी कति जनाको जीवन गयो अब त्यो हेर्दिन पर्यो नि ।त्यही भएर डाक्टरले गरेको रिपोर्टमा पनि १०० प्रतिशत नै सही आउँछ भन्न्न सकिंदैन ।
८. नारीको पहिरनले गर्दा बलात्कृत भएको भन्नेलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?
नारीको पहिरनलाई आधार मानेर बलात्कार हुन्छ भन्नु चाँही त्यो मान्छे अचेतनशील हो । ६ वर्षकी बच्ची आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत हुन्छे के त्यो अबनांगै भएर हो ?हामी आफैले यस्ता गलत हल्लालाई विवेक पुर्याएर बुझ्नुपर्छ । यो दिमाग नभएकाहरुले गर्ने टिप्पणी हो । तर विवेक भएकोल ेचाँही विश्लेषण गर्छ । घटनालाई गहिरो गरी बुझेर टिप्पणी गर्छ । कसैले लगाएको पहिरनकै कारण कोही बलात्कार हुन्छ भने म त त्यस्तोलाई बौद्धिक दरिद्र भन्छु । तिनीहरुलाई घाँस हल्दिए हुन्छ ।
एसईई परीक्षामा अरुको नाममा परीक्षा दिने र दिन लगाउने पक्राउ